सनराइजको ब्लुचिप फण्डमा रु. १ अर्ब २३ करोड बढीको आवेदन – online arthik
सनराइजको ब्लुचिप फण्डमा रु. १ अर्ब २३ करोड बढीको आवेदन
सोमबार, चैत्र ०९, २०७७ | ११:२८:२४ |
सनराइज क्यापिटलले बिक्री खुला गरेको सनराइज ब्लूचीप फण्ड योजनामा १ अर्ब २३ करोड ७५ लाख ८० हजार ४०० रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ । फन्ड म्यानेजर सनराइज क्यापिटलकाअनुसार आइतबार (चैत्र ८ गते) साँझ ५ः०० बजेसम्म ५६ हजार ८० जना आवेदकहरुले आवेदन दिएका छन् ।
सोमध्ये करिब १२ प्रतिशत आवेदनको सिआश्वा बैंकमार्फत रुजु हुन बाँकी रहेको छ भने हालसम्म करिब ५ प्रतिशत आवेदन भने रद्द भएको क्यापिटलले जनाएको छ । सनराइज क्यापिटलले चैत्र १ गतेदेखि सनराइज म्युचुअल फण्डअन्तर्गत १० करोड इकाई बिक्री खुल्ला गरेको थियो ।
जसमध्ये कुल ईकाईको १५ प्रतिशत अर्थात १ करोड ५० लाख इकाई कोष प्रवद्र्धक सनराइज बैंकलाई सुरक्षित राखेको छ र बाँकी रहेको ८ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधरणलाई बिक्री खुला गरेको थियो । सनराइज क्यापिटलले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित दरमा १ अर्ब रुपैयाँ इकाई बिक्रीमा ल्याएको थियो । यो दश वर्षे बन्दमुखी योजना रहेको छ ।
सनराइज क्यापिटल सनराइज बैंकको पूर्ण स्वामित्व भएको सहायक कम्पनी हो ।